Yeremiya 8 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
8 “Ngelo xesha,” utsho uYehova, “abantu baya kuwakhupha amathambo ookumkani bakwaYuda namathambo eenkosana zayo namathambo ababingeleli namathambo abaprofeti namathambo abemi baseYerusalem emangcwabeni abo.+ 2 Kwaye okunene baya kuwaneka elangeni nasenyangeni nakuwo wonke umkhosi wamazulu ababewuthanda nabawukhonzileyo nabawulandeleyo+ nabaqubude kuwo.+ Akayi kuhlanganiswa, engayi kungcwatywa. Aya kuba ngumgquba phezu kobuso bomhlaba.”+ 3 “Ngokuqinisekileyo iya kunyula ukufa kunobomi+ intsalela yonke yabo baseleyo kule ntsapho imbi ezindaweni zonke zabaseleyo, apho ndiza kube ndibasasazele khona,”+ utsho uYehova wemikhosi. 4 “Yaye umele uthi kubo, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Baya kuwa na baze bangasukumi kwakhona?+ Ukuba ubani angabuya, akayi kubuya na nomnye?+ 5 Kutheni na esi sizwana, iYerusalem, sihlala singathembekanga? Sibambelele enkohlisweni;+ salile ukubuya.+ 6 Ndiye ndanikela ingqalelo,+ ndaza ndaqhubeka ndiphulaphule.+ Ibingalunganga indlela esiye saqhubeka sithetha ngayo. Kwakungekho mntu uguqukayo ebubini bakhe,+ esithi, ‘Yintoni na le ndiyenzileyo?’ Ngamnye ubuyela kwikhondo elithandwayo,+ kanye njengehashe eliphalayo lisiya edabini. 7 Yona kanye ingwamza emazulwini—iwazi kakuhle amaxesha ayo amisiweyo;+ nehobe lasendle+ nehlankomo nekhwebula—nganye iligcina kakuhle ixesha lokungena kwayo. Kodwa bona abantu bam, abawazanga umgwebo kaYehova.”’+ 8 “‘Ningathini na ukuthi: “Sizizilumko, yaye umthetho kaYehova unathi”?+ Ke kaloku, ngokuqinisekileyo usiba lobuxoki+ loonobhala lusebenze ubuxoki obupheleleyo. 9 Izilumko zibe neentloni.+ Zinkwantyile kwaye ziya kubanjiswa. Khangela! Ziligatyile ilizwi likaYehova, zinabuphi na ke ubulumko?+ 10 Ngoko ke abafazi babo ndiya kubanikela kwamanye amadoda, amasimi abo abe lilifa labanye;+ kuba, ukususela koyena mncinane kude kuse koyena mkhulu, ngamnye wenza inzuzo ngokungekho sikweni;+ ukususela kumprofeti kude kuse kumbingeleli, ngamnye wenza ngobuxoki.+ 11 Kwaye bazama ukukuphilisa ukuwa kwentombi yabantu bam ngokulula,+ besithi: “Luxolo! Luxolo!” ngoxa kungekho luxolo.+ 12 Baziva beneentloni na ngenxa yokuba benze into ecekisekayo?+ Noko ke, ngokuqinisekileyo abaziva beneentloni; kwaye abaziva bethotyiwe.+ “‘Ngoko ke baya kuwa phakathi kwabo bawayo. Ngexesha lokunikelwa kwabo ingqalelo,+ baya kukhubeka,’ utsho uYehova.+ 13 “‘Xa kubuthwa, ndiya kubaphelisa,’ utsho uYehova.+ ‘Akuyi kubakho zidiliya emdiliyeni,+ kungabikho makhiwane emkhiwaneni, yaye ngokuqinisekileyo namahlamvu aya kubuna. Nezinto endibanika zona ziya kudlula kubo.’” 14 “Kutheni na sahlala? Zihlanganiseni ndawonye, singene ezixekweni ezinqatyisiweyo+ size sithi cwaka apho. Kuba uYehova uThixo wethu usivale umlomo,+ kwaye usiseza amanzi anetyhefu,+ ngenxa yokuba simonile uYehova. 15 Besithembe uxolo, kodwa akukho kulunga kufikileyo;+ nexesha lokuphiliswa, kodwa, khangela! into enkwantyisayo!+ 16 Ukubeth’ ithatha kwamahashe akhe kuviwe kuvela kwaDan.+ Ngenxa yesandi sokukhala kweenkunzi zamahashe akhe ilizwe liphela liyanyikima.+ Kwaye ayafika aze alidle aligqibe ilizwe noko lizele kuko, isixeko nabemi baso.” 17 “Kuba yabonani, ndithumela phakathi kwenu iinyoka, iinyoka ezinobuhlungu,+ ekungenakusetyenziswa makhubalo kuzo,+ yaye ngokuqinisekileyo ziya kuniluma,” utsho uYehova. 18 Ndifikelwe yintlungu enganyangekiyo.+ Intliziyo yam iyagula. 19 Yabona, isandi sokukhalela uncedo kwentombi yabantu bam sivela kwilizwe elikude sisithi:+ “UYehova akakho seZiyon na?+ Okanye ukumkani wayo akakho kuyo na?”+ “Kutheni na ukuze bandicaphukise ngemifanekiso yabo eqingqiweyo, ngoothixo babo abalilize basemzini?”+ 20 “Ukuvuna kudlule, ihlobo liphelile; kodwa thina ke, asisindiswanga!”+ 21 Ngenxa yokuwa+ kwentombi yabantu bakowethu ndiqotyiwe.+ Ndibe buhlungu. Ndibanjwe kukukhwankqiswa.+ 22 Akukho bhalsam na eGiliyadi?+ Okanye akukho mphilisi na apho?+ Kutheni, ke, ingachachanga+ intombi yabantu bam?+